Amerika Latina29 Jona 2018
Tao Kiobà tamin'ny taona 1953, teo amperin'ady hanohitra ny jadona nataon'i Fulgencio Batista izay nahazo tohana tamin'ny fiarovan'ireo Amerikana, nitarika vondrona iray nisy an'ireo tanora revolisionera i Fidel Castro nandritra ny fanafihana ny Toby Moncada tao Santiago. Ankehitriny io hetsika io dia fantatra amin'ny maha-fiandohan'ny Revolisiona Kiobàna azy. Tamin'ny faran'ny...
Azia Afovoany sy Kaokazy27 Jona 2018
Ankalazaina ho Andron'ny Mpiaro ny Tanindrazana ao Ozbekistana ny 14 janoary. Andro iray mialoha ity andro ity, nisy ny lanonana fanokafana lehibe amin'ny tsangambato "Fianianana ho an'ny Tanindrazana" natao tao Tashkent, renivohitr'i Ozbekistana.
Iran: Nanokatra fantsom-pahitalavitra persiana vaovao ny BBC
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana27 Jona 2018
Nahazo dera ny fandefasana ny Fahitalavitra BBC Persiana tamin'ny 14 Janoary 2009 ary niteraka hafanam-po, ahiahy, ary nisarika ny saina raha fehezina ! Naneho ny hevitr'izy ireo momba ity fantsona vaovao ity ireo bilaogera Iraniana, ary samihafa avokoa izy ireo.
Amerika Avaratra26 Jona 2018
Azia Atsimo20 Jona 2018
Amerika Latina19 Jona 2018
Amerika Avaratra18 Jona 2018
Amerika Avaratra17 Jona 2018
Amerika Avaratra16 Jona 2018